Thursday November 27, 2014 - 11:04:50 in Wararka by Super Admin
Tirakoobyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay waxaa lagu sheegay in tirada dadka duqeyntaas ku dhintay in ay kor u dhaafeen 130 ruux oo Muslimiin ah, iyadoo dhaawacana uu ka badanyahay 130 ruux.
Il wareedyo caafimaad oo ka tirsan Isbitaalka dhexe ee magaalada Raqqah oo diiday in magaciisa la xigto ayaa sheegay in Isbitaalka la keenay meydadka dad aad u fara badan oo jirkoodu aad u go go'ay, isagoo tilmaamay in dawo la'aanta iyo dhakhaatiir yarida magaalada ka jirta ay sababtay in dhammaan dadkii xasuuqaas ku dhaawacmay la keeno Isbitaalka dhexe ee magaalada.
Duqeyntan oo Ciidanka Nuseyridu ay u adeegsadeen Haamaha waaweyn ee laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa, islamarkaana laga soo tuuro diyaaradaha Helicoterska ayaa waxay sidoo kale sababtay inay ku bur buraan wax ka badan Soddon dhisme iyo 40 goobood oo ganacsi ah, waxaana cabsi xooggan ay soo wajahday dadweynaha shacabka ah ee magaalada ku nool, iyadoo xasuuqii Talaadadii halkaas ka dhacay uu ka dhigayo mid ka mid ah maalmihii ugu xumaa ee magaaladaas soo mara.
Diyaaradaha Isbaheysiga Saliibiga ah ee reer galbeedka ayaa sidoo kale ka qeyb qaadanaya duqeymaha lagu garaacayo magaalada Raqqa, laba maalmood ka hor waxay diyaaradaha Taxaalufka Sheydaaniga ah ay beegsadeen Iskuul hoose oo wax lagu baro carruurta indhoolayaasha iyo kuwa dhagoolayaasha ah ee magaalada kuyaalla, waxaana bur bur xooggan uu soo gaaray dhismaha Iskuulka.
Laakiin duqeymaha ugu khasaaraha badan oo ah kuwa ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Nidaamka Nuseyriga ee Bashaar Al-Asad ayaa waxaa lala beegsaday Suuq ay dadku aad ugu badanyihiin oo u dhow Matxafka, deegaanka Warshadaha iyo hareeraha Masjidka Al-Xunaa, inkabadan tobon weerar oo sababay dhimashada dad ka badan 130 ruux ayaa halkaas ka dhacay.
Weerarkan dhimashada badan sababay ee ka dhacay magaalada Raqqah ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu xumaa ee mudooyinkii dambe halkaas ka dhaca, waxaana tani ay kusoo beegmeysaa xilli bilihii lasoo dhaafay Ciidamada nidaamka Bashaar Al-Asad ee dhiigyo cabka ah awoodooda lagu wiiqay dagaallada ka soconaya dalka Suuriya.
Dhinaca kalena qaar ka tirsan Jamaacaatka Suuriya ka dagaallamaya ayaa ku dhawaaqay inay guulo kasoo hooyeen dagaallo lagu hoobtay oo muddo todobaad ah ka soconayay duleedka magaalada Xalab.
Jamaacaatka Jihaadiga ee kala ah Jabhatu Nusrah iyo Ansaaru Diini oo ay wehlinayaan qaar ka mid ah xoogagga kacdoon wadayaasha ayaa la wareegay deegaanka Xandaraat ee waqooyiga magaalada Xalab, halkaas oo ah Mandiqad Istaraatiiji ah oo bilihii lasoo dhaafay Ciidanka Nidaamka Bashaar Al-Asad ay isku dayayeen inay kasoo taqaddumaan, si ay u go'doomiyaan magaaladaas istaraatiijiga ah.
Dhowr todobaad ka hor Maleeshiyada Bashaar Al-Asad waxaa u suura gashay inay qabsadaan qeybo ka tirsan deegaannada Xandaraat iyo Seyfaat, taas oo qeyb ka ah howlgal meliteri oo ay ku doonayeen in jihada waqooyi ay kasoo hareereeyaan magaalada Xalab, xilli dhinaca kalena ay wadeen qorshe kaas la mid ah oo hadafkiisu yahay inay waddooyinka ka xiraan xoogagga Mujaahidiinta iyo kuwa kacdoon wadayaasha ee bariga magaaladaas ka dagaallamaya.
Baadiyaha Xalabna, Jamaacaada islaamiga ah ee Jabhatu Nusrah iyo kooxo kale ee kacdoon wadayaasha ayaa waxay weli sii wadaan weerarrada ay ku hayaan deegaannada kala ah Nubul iyo Zahraa oo ah laba deegaan oo ay ku xoogganyihiin kooxaha Nuseyriyiinta ah ee taageersan Nidaamka Bashaar Al-Asad.
Haddii aan eegno dhinaca magaalada Dimishiqna, waxaa dib usoo cusboonaaday iska hor yimaadyada goos gooska ah ee ka soconaya Xaafadda Jowbar ee ku taalla bariga magaaladaas, taas oo illaa bishii July ee aan soo dhaafnay marti gelineysay dagaallo culus oo ay soo qaadeen Maleeshiyada Nidaamka Bashaar Al-Asad oo ay ku doonayaan in xaafaddaas ay ku qabsadaan.
Duleedka magaalada Caasimadda ahna waxay dagaalladu ka socdaan deegaanno ka tirsan Ghuudatu Sharqiyah ee baadiyaha Dimishiq, waxaana taas bar bar soconaya duqeynmo dhinaca cirka iyo dhulka ah oo Ciidanka Nidaamku ay halkaas ka geysanayaan.
Maleeshiyada Ururka Shiiciga ee Xizbu Sheydaan ayaa kaalinta ugu weyn ka qaadanaya dagaalka ka soconaya duleedka Dimishiq iyo deegaannada ku xeeran, waxaana dagaalladii ugu dambeeyay oo ka dhacay halka lagu magacaabo Fuleydha lagu dilay Lix ka tirsan Maleeshiyaadka Rawaafidda, sida ay baahisay Shabakadda lagu magacaabo Shaam Press.